निवर्तमान (Nibartaman) ||: March 2010
'शैक्षिक जागरण अभियान कार्यक्रमलाई यसरी लैजान आग्रह गर्र्छौं कि जुन विद्यालयमा पढ्ने छात्रछात्राहरु गरिबीको रेखामुनिका परिवार होउन् । जसलाई शैक्षिक सामग्रीको अभावमा पढाइबाट बञ्चीत हुनुपरेको अवस्था रहेको होस् ।' यो त थियो वसन्त पोखरेलको 'सानो तर मीठो सामाजिक सेवामा एकछिन लाग्दा' शीषर्ात्मक लेख -बुटवल टुडे, अंक ९१, ०६६ फाल्गुण १३) मा उल्लेखित पंक्ति । उहाँले लेखमा उल्लेख गरे अनुसार ०६६ फाल्गुण ८ गते हामीले एउटा सानो सामाजिक कार्य गर्‍यौँ । कार्यक्रमको बारेमा उहाँले नै प्रकाश पारिसक्नु भएको हुँदा थप लेठो गरेर पाठकहरुको दिमाग चाट्ने धृष्टता मैले कदापी गर्नुहुँदैन । उल्लेखित पंक्तिलाई साकार रुप दिनकै लागि हामीले आर्थिक दुरावस्थाका कारण शैक्षिक कार्यक्रममा भाग लिन नसकेका नानीहरुलाई चेतना बाँड्ने कार्यमा सहयोग गर्न एउटा अभियान सुरु गरेका हौँ । उहाँले उक्त आलेखका लागि कार्यक्रममा खिचिएको तस्वीर माग्नु भएको थियो तर मैले कार्यव्यस्तताले गर्दा वहाँलाई उक्त तस्वीर उपलब्ध गराउन सकिन । यसको लागि म वहाँप्रति विशेष रुपमा क्षमाप्रार्थी छु । -हे.तस्वीर) वसन्त पोखरेलको लेख पढेर फर्सर्ााकरबाट रमेश नामका एकजना अपरिचित मित्रले सर्म्पर्क गर्नुभयो कि उहाँ पनि यस अभियानको सदस्य बन्न उत्सुक हुनुहुन्छ र केही साथीहरुकेा समूह पनि जुटाइसक्नु भएको छ । उहाँको सर्म्पर्कबाट म निकै हषिर्त भएको छु । उहाँहरु जस्ता धेरै साथीहरुलाई आव्हान गर्न मैले यस आलेखमा हामीले संचालन गरेको शैक्षिक जागरण अभियानको बारेमा केही जानकारी दिने प्रयास गरेको छु । जीवनको लागि शिक्षा तेस्रो आँखा हो जसले दर्ुइवटा भौतिक आँखाले भन्दा बढी देख्छ । जीवन र जगतको ज्ञान दिन्छ, अनि असल र खराब छुट्टयाउन मद्धत गर्छ र सदैव सत्यको पक्षमा वकालत गर्न पे्ररणा दिन्छ । शिक्षाको कुरा गर्दा चेतनालाई छुटाउनु हुँदैन । किनकि शिक्षा र चेतना एक आपसमा अन्तर्निहीत हुन्छन् । यी एकअर्काका परिपूरक हुन् । शिक्षाले चेतनाको विकास गर्छ भने चेतनाले असल शिक्षा ग्रहण गर्नमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । तर आजको यस सूचनाप्रविधिको युगमा पनि हाम्रा नानीहरु शिक्षाको उज्ज्यालो ज्योतिबाट बञ्चीत हुनु निश्चय नै दुःख र लज्जाको विषय हो । र पनि यो हाम्रो समाजको कटु यथार्थ हो ।
भौतिक सुखसुविधा, धनसम्पत्ती, मोजमस्ती र भोग विलासलाई सफलताको व्यारोमिटर मान्ने हाम्रो समाजले व्यक्तिलाई पर्ूण्ारुपमा आत्मकेन्द्रीत बनाएको छ । त्यसैले त मानिस रातदिन अवसरको पछि दौडन्छ र आफूलाई औशतभन्दा माथि भएको ठान्छ । अझ भनौँ मानिस आफ्नो बाहेक अरुको बारेमा कुनै चासो अनि चिन्ता लिँदैन । उसलाई अरुको बारेमा सोच्न न कुनै फर्ुशद नै छ न कुनै जाँगर नै । मात्र ऊ आफ्नो र आफ्नो घरपरिवारको सुखसुविधा हर्ेछ र त्यसलाई कुनैपनि मूल्यमा प्राप्त गर्न हरदम आतूर रहन्छ । आजको भूमण्डलीकरणको युगमा उपभोक्तावादको चँगुलमा फँसेको युवापुस्ताले समाज र राष्ट्रको लागि कमै समय दिएका भेटिन्छन् । त्यसमाथि पनि समग्र मानव जातिको उत्थानका लागि केही नौलो आयामको समुद्घाटन गर्लान् भनेर आश्वस्त हुने ठाउँ त निकै कम छ । यस्तै कम दृष्टान्तहरु मध्ये कर्पोरेट संसारका हस्ती माइक्रोसफ्टका जोन उडले गरेका छन् ।
अमेरिका जस्तो आफूलाई महाशक्तिशाली मान्ने राष्ट्रमा जन्मिएका नागरिक जो, माइक्रोसफ्ट जस्तो संसारकै प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम गर्थे, उनी विश्वका विपन्न समुदायका बालकालिकामा शिक्षाको ज्योति फैलाउने दृढ अठोटका साथ आफ्नो काम, नाम र दाम सबै छाडी धोक्रा भरी पुस्तक बोकेर हिंडे । अमेरिका जस्तो चरम् व्यक्तिवादी मुलुकमा जन्मिएका, त्यसमाथि पनि माइक्रोसफ्ट जस्तो विश्वकै ठूलो र धनी संस्थाका बजार निर्देशकलाई के नपुग्दो थियो र - तर मानव जातिको हितका लागि आफ्नो ऐसआरामपर्ूण्ा विलासी जीवन चटक्कै छाडी उनी धोक्रामा पुस्तक बोकी हिंडे । यस क्रममा उनी भौतिक सुखसयलबाट मात्र बञ्चीत भएनन् परन्तु आफ्नी प्रमिकासमेतलाई छाडी शिक्षाको ज्योति फैलाउन अनिश्चयको यात्रा तर्फलम्के । उनको यो कल्याणकारी कदमको मुक्तकण्डले प्रशंसा गर्नैपर्छ । तिनै मानवतावादी हृदयका अमेरिकी नागरिक जोन उडले आफ्नो 'रुम टु रिड' अभियानमार्फ शिक्षाका माध्यमबाट संसार बदल्ने अठोटका साथ विश्वका अति कमविकसीत राष्ट्रहरुका लाखौँ नानीहरुलाई चेतना बाँड्ने काम गरे । उनको यो परोपकारी अभियानलाई थालनी गरेको कुरा तबमात्र थाहा भयो जब उनले आफ्नो अभियानको ८ वर्षो अनुभवलाई आफ्नो पुस्तक 'लिभिङ माइक्रोसफ्ट टु चेन्ज द वर्ल्ड'मा लिपिबद्ध गरे । र यसलाई आफ्ना शब्दशिल्पी हातहरुले नेपाली भाषामा अनुवाद गरी प्रगतिशील लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले नेपाली पाठकलाई लाउनुसम्मको गुण लगाएका छन् । पुस्तकलाई मौलिक कृतिको रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले ठ्याक्कै नेपाली नाम पनि जुराए 'माइक्रोसफ्ट देखि बाहुनडाँडासम्म' । उडले आफ्नो पुस्तकमा आफूले सञ्चालन गरेको परोपकारी अभियानलाई अघि बढाउने क्रममा खेपेका संर्घष्ाका कथाहरुलाई सिलसिलेबार ढंगमा उनेका छन् जुन पुस्तक पठनीय मात्र नभै संग्रहनीय पनि छ ।
तिनै मानवतावादी हृदयका जोन उडको पुस्तक पढ्दा हामीलाई निकै लज्जाबोध भयो । किनकि एउटा विदेशी खैरे धोक्रामा पुस्तक बोकेर हाम्रा नानीहरुलाई पढाउन नेपाल आउँछ तर हामी यही समाजका शिक्षित भनाउँदाहरु आकाशपातालका गफ चुटी -अझ टुटेफुटेको अंग्रजी मिर्साई) साइबर क्याफे र बेकरीहरुमा हल्लिरहेका हुन्छौं । हामी आफूहरुलाई आधुनिक भएको भन्ठान्छौं तर आफ्नै नाकैमुन्तिरको गरिबी, अशिक्षा र उत्पीडनलाई देखेनदेखेझैं गर्र्छौं । हाम्रो चेतनास्तर यतिसम्म गिरेको छ कि हामीलाई आफ्नो स्वार्थइतरका कुराहरुका बारेमा सोच्नसम्म पनि समय छैन । हामी असाध्यै व्यस्त छौं ।
शिक्षा नै नयाँ नेपाल निर्माणको दरिलो र बलियो आधार भएकाले जोन उडको यो अनुकरणीय कामबाट प्ररित भई हामी केही साथीहरुले शिक्षाको क्षेत्रमा चेतना बाँड्ने ध्ययेले 'शैक्षिक जागरण अभियान' को सुरुवात गरेका थियौँ र अत्यन्तै सानो अंशमा संकलित रकमबाट हामीले अभियानको तर्फाट पहिलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं, बटवल १५ बँदेलपोखरीमा अवस्थित श्री जितेश्वरी प्रा.वि.का १४० जना विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेर । जसको बारेमा माथि नै चर्चा भइसकेको छ । आर्थिक दुरावस्थाका कारण पाठ्यसामग्रीको अभावमा पढ्नलेख्नबाट बञ्चीत बालबालिकाहरुलाई पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराएर पढ्नका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ यो अभियानको थालनी गरिएको हो । हाम्रो अभियानको मुल नारा 'सबै नानीहरुले पढ्न पाउनर्ुपर्छ' रहेको छ भने आम नागरिकहरुलाई कम्तीमा दैनिक रु.१ बचत गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नानीहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्न सहयोग गरौँ भन्ने रहेको छ ।
निश्चित रुपमा आफ्नो चाहनाले आम्दानीका श्रोतहरु बढाउन नसकिने हुँदा निश्चित आयमा बाँच्नुपर्ने हाम्रो विवशता विद्यमान छ । र पनि थोरै सहयोगका लागि दिनहुँ हुने खर्चमा भने केही अंशले कटौति गर्न सकिन्छ । जस्तो कि कसैको चुरोट पिउने बानी छ भने प्रतिदिन एक खिल्ली चुरोट कम पिएर केही रुपैँया बचत गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी आजको सूचनाप्रविधिको युगमा हामी सबैको हातहातमा मोबाइल छ । हामी मोवाइल फोनमा घन्टौँ कुरा गर्र्छौँ । हो, हामीले मोबाइल फोनमा गर्ने कुराको अवधी प्रतिदिन एक मिनेटले मात्र कटौती गर्न सक्यौँ भने पनि केही रकम बचत गर्न सक्छौं । हामीसँग कल्याणकारी सोच भयो भने सानो सानो सहयोगले पनि निकै ठूलो काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले आफूले गर्ने खर्चमा कम्तीमा पनि दैनिक रु.१ ले कटौति गरी यो अभियानलाई सहयोग गर्न सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । पाठकवृन्दहरु ! तपाइँहरुलाई पनि यो मानवीय काममा एउटा इँटा थप्ने इच्छा छ भने कृपया बुटवल फाइनान्स लिमिटेडमा रहेका अभियानको खाता नं. ३१-००८८३-९ मा इच्छा अनुसारको रकम जम्मा गरी सहयोग गर्नसक्नुहुनेछ । त्यसैगरी सर्म्पर्क गर्नुपरेमा ९८४७१२८८८९ वा ९८५७०२०३३३ वा ९८४७३१६०६९ डायल गर्नु भएमा हार्दिकताका साथ स्वागत गर्नेछौँ । तपाईंहरुको सानो सहयोगले शिक्षाको उज्यालो ज्योतीबाट बञ्चीत कलिला नानीहरुले शिक्षाको अवसर पाउनेछन् । आउनुहोस् चेतनाको ज्योति बाँड्ने महान् कार्यमा सहभागि बनी मानवताको परिचय दिनुहोस् !